About DIY Electric skeidgareeyo - Jomo Technology Co., Ltd
Oo ay la socdaan skeidgareeyo korontada waa kulul oo soo dhaweeyay by dadka dhallinyarada ah oo casri ah, ilaa iyo inta leedahay heer sare ah guddiga dheelitirka Electric , waxay u badan tahay in ay sameeyaan DIY qaar ka mid ah sida ay u kala jeceshahay. Dhawaan ayaan u ogaato qaar ka mid ah lagu skeidgareeyo DIY qabow on Instagram.
Pace: A E-longboard degdeg ah ayaa kaa caawin doona inay ku guuleystaan ​​aad u socoto wakhtiga. 30km The xawaaraha caadiga ah saacadiiba, xawaaraha sare la gaaray karaa saacaddii 45km, u tag si dhakhso ah. qiimeynta kale waa aalad in lagu skeidgareeyo korontada la kulmi doono oo dhan ka dhimo maalin kasta, sida-safarka gaaban, tag shopping iyo wixii la mid ah.
Kuwa soo socda waa Koowheel ay muujinayso iibsadaha ee Electric longboard skeidgareeyo D3M in aan soo xushay on Instagram. Waa kuwee mid ka mid ah u jeceshahay inaad? Waxay yihiin qabow iyo fantastic. Koowheel waa mid aad u skeidgareeyo moodada korontada la gaaray saldhig weyn ee raacsan yihiin in la yaabay by its oolnimada. Maxay sidaa kulul? Waa Dual Brushless Hub-Motors, 7-lakabka of CanadianMaple Wood + fiber galaas (optional), dhulka ansixin waa 85mm (3.35inch), ku haboon dhammaan waddooyinka magaalada. Waxaa intaa dheer, pack batari badeli, 2pcs baakad batteriga wuxuu socon karaa 60km, tag dheer. Sidaas awgeed, waxaan lahaa filayo sare oo ay ka aloosantay marka danbaynti yimid.
Marka aad aragto kuwaas DIY hal abuur leh, Ma leedahay fikrad dheeraad ah u gaar ah ee maskaxdaada? fikrado badan ayaa abuuray dadka, aad tusi kartaa fikrado aad u gaar ah sida ugu badan ee suurtogalka ah, ka dibna fadlan la wadaagto nala by tag Koowheel on your Instagram. Koowheel website-ka iyo Facebook la wadaagi doonaan waayo aragnimadaada KOOWHEEL.
Wayna kari waayeen waxa safarka, laakiin bartay in waqti gaaban. Waxyaalahaasu waa waxa hoot a total in ay la kulmaan wareega on. Qaado kula gaadiidka dadweynaha iyo u fuulaan, jidka aad joogitaanka. Recently, Koowheel horumariyo 2aad Generation Electric skeidgareeyo Kooboard la giraangiraha badeli. Haddaba Siidalbo la aqbali karin. Waxaa laga yaabaa in aad ku weydiin doonaa in waxa cusub oo ku saabsan 2 nd mid ka ab? Ha i idiin sheegi hoos.
2. fog New
3. New Motors / giraangiraha
350W New x 2 Motors la giraangiraha badeli PU
design gaar ah caawin doona matoorrada maximumly qaboojinta
4. Battery Updated
Xidhiidhiyayaasha New of arrinta batteriga ka dheeraw ku xira
Barnaamijka New batteriga ka Oogay Fariin regenerative ilaalin doonaa. Markaas Kooboard jabiyay doonaa si tartiib tartiib ah oo stop. New onika la sharraxaa & xajin Tape, iyo more ...
waqti Post: Sep-22-2017